Inductive Frequency Induction Heating Power Supplies, Generaotr, 15kw
Home / Media Series Frequency / Generator herinaratra fampidirana matetika
Sokajy: Media Series Frequency Tags: hery induction freqeuncy, mpanelanelana matetika, Meny fitetezana, indraindray fampitaovana induction induction, indraindray, Masinina fanidiana MF, Masinina mandroba MF, MF induction heater, Fampandehanana MF, Lafaoro fandefasana lafaoro
Ny hery goavana, ny fahita matetika ary ny diathermancy tsara.
Fiatoana avo, fihenam-bidy ambany, fametrahana mora sy tsotra.
Afaka miasa foana izy mandritra ny ora 24 noho ny drafitra feno feno.
Izy io dia manendry ny fiovaovan'ny toetr'andro IGBT amin'ny fifandraisana parallelly, izay manana haingana ny fampifanarahana.
Izy io dia miasa toy ny mihoatra ny tetezana, mahery vaika mihoatra noho ny hatsiaka, ny hafanana, ny fahaverezan'ny fatiantany ary ny famantarana ny tsy fahampian-drano noho ny fanaraha-maso sy ny fiarovana.
Raha oharina amin'ny modely fanalefahana hafa, dia mety hampiroborobo ny tombontsoa ara-toekarena izy io, hanatsara ny kalitaon'ny asa mafana, manavotra ny angovo sy ny fitaovana, manamaivana ny haavon'ny asa sy manatsara ny tontolo iainana famokarana.
Faniriana ny faniriana fahefana
3 phase, 380V, 50 / 60HZ
Matanjaka ny osa
Ny dingan'ny max
Faniriana rano mangatsiaka
> 0.2MPa, 6L / Min
Indraindray matetika ny indostria fantsona fampandroana dia ampiasaina amin'ny fotoana fanasitranana fanosorana, ohatra, ny fantson-doha amin'ny fanorenana ny faneva
Famafazana karazana metaly
Fanaraha-maso ny rindrina na randran-tanana
Fanaraha-maso ny fantson-tsiramamy ho fampidirana
Ny fanamainana ny lamosina famonoana lalina ny soavaly sy ny fitaovam-pandrosoana na ny fanomanana ny fametahana sy ny sisa
Indépendant inductor indépendance